လိင်ဆိုင်ရာပြProbleနာများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - porn သည်လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားနည်းစေသည်
မျက်မှောက်ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများမြင့်တက်လာသည်။ ဤသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (DE), အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE), အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့် anorgasmia သက်ဆိုင်သည်။ အလည်အပတ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် အတွက် porn အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်း။ porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်နိုင်ရန်ဤနိဒါန်းဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ porn-သွေးဆောင် ED (PIED) ။
မှာသက်ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုအကျဉ်းချုပ် Read သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြုလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုသတိပြုရန်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ကုထုံးပညာရှင်များပါဝင်သည့်သတင်းဆောင်းပါးနှင့်အင်တာဗျူးပေါင်း ၁၄၀ တွင် ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကုသသောကျွမ်းကျင်သူများ.
အဘယ်အရာကိုလေ့လာမှုများကော? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
80 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ယောက်ျားနှင့်ပါတ်သက်သောလေ့လာမှုများအရ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုပိုမိုရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် ဆင်းရဲတဲ့ လိင်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျေနပ်မှု။ အဖြစ်ဝေးငါတို့သိသည်အတိုင်းဤသက်ဆိုင်သည် အားလုံး လေ့လာမှု ၇၅ ခု။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကအမျိုးသမီးများ၌လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပိုကောင်းသော (သို့မဟုတ်ကြားနေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းအများစုမှာ (ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ) arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ).
porn စွဲ၏အသံဝေဖန်သူများကမဟုတ်မမှန် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn စွဲကွာရှင်းပြသော။ တောင်းဆို အဖြစ်မှန်မှာတော့ လေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်ကလိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်။